Filtrer les éléments par date : samedi, 29 août 2020
samedi, 29 août 2020 20:00
Akinwumi Adesina: Voafidy fanindroany ho filohan’ny Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana
Nanamafy ny fitokisany amin’ity teratany Nizeriana ny 100% ny mpifidy, ary dia voafidy fanindroany ho filohan’ny Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana i Akinwumi Adesina.
Dimy taona ny fe-potoana iasany amin’izany.
Maro ny tetikasa fampandrosoana vatsian’ny BAD eto Madagasikara. Efa in-droa nitsidika teto i Akinwumi Adesina, ny taona 2016 sy ny taona 2019, nitarika fivoriana iraisam-pirenena ary koa nijery ireo tetikasa vatsian’ny BAD vola.
samedi, 29 août 2020 19:50
Japon: Nametra-pialana ny Praminisitra Shinzo Abe
Antony ara-pahasalamana, aretin’ny tsinay niotrika tao aminy, izay nambarany tsy ahafahany manatanteraka an-tsakany sy an-davany ny asa aman’andraikiny, no nanapahany hevitra ny hametra-pialana ary nanaovany fialantsiny tamin’ny Vahoaka japoney.
Nanomboka ny taona 2012 i Shinzo Abe no praminisitra tany Japon. Izy no isany naharitra teo amin’io toerana io.
Hanohy ny asany izy mandram-panendry izay handimby toerana azy.
samedi, 29 août 2020 19:45
Le spécisme est la vision du monde postulant une hiérarchie entre les espèces animales et, en particulier, la supériorité de l'être humain sur les animaux.
29 août: Journée Internationale contre les essais nucléaires.
samedi, 29 août 2020 19:26
Faritra Atsinanana: Fankasitrahana ho an'ny Toby EKAR ao MAROTSIRIRY izay tantanan-dry Masera
Olona maherin'ny 8 000 isan-taona no tonga mila vonjy sy fitsaboana eto:
- Dispansera sy toeram-pitsaboana,
- Ivon-toerana fambolena sy fiompiana,
- ivontoeram-pitaizana tanora lahy sy vavy,
- toeram-pialokalofana mitaiza vatana sy fanahy.
Efa am-polo taonany maro no niasa teto ireto relijiozy Katolika. Tamin'ny taona 1973 no nahazo fankatoavana ara-panjakana ho Tobim-pahasalamana. Mponina maro amin'ireo fokontany ao amin'ireo Kaominina manodidina no misitraka ny asan'ireto relijiozy ireto.